समाज | Nepali Virals
जन 20, 2018 | जानकारी, समाज
विश्वका कुनै पनि सभ्य समाजमा बलत्कारलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिइन्छ । बलत्कारमा परेका पीडितले जीवनभर मानसिक यातना झेल्नु पर्छ । कतिपय अवस्थामा उनका कुनै दोष नभए पनि सामाजिक तिरस्कारसमेत भोग्न बाध्य हुनुपर्छ । सामाजिक प्रताडना, बदनामी झेल्न नसकेर कतिपय अवस्थामा त बलत्कृत महिलाहरूले आत्महत्या नै गर्नु परेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपालमा बलत्कारसम्बन्धी सजाय केही खुकुलो भएको, बलत्कारसम्बन्धी उजुरी र कानुनी कारबाही प्रक्रियामा जाँदा उल्टै बदनाम हुने डर, न्याय पाउनमा हुने ढिलाइले गर्दा धेरैजसो घटनाहरू गोप्य नै राखिन्छन् । तर विश्वमा केही यस्ता देश छन् । जहाँ बलत्कारीहरूप्रति कडा कानुनी कारबाहीका व्यवस्था छन् । आज हामी त्यस्तै कडा कानुनी व्यवस्था भएका देशहरूका ’boutमा चर्चा गर्दैछाैं ।
चीनमा बलत्कारीहरूलाई सीधै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइन्छ । कतिपय गम्भीर प्रकरणमा त बलत्कारीको गुप्तांग काटिदिने वा निष्क्रिय तुल्याइदिनेसम्मका सजाय दिइन्छ ।
ईरानमा बलत्कारीलाई सीधै फाँसीका सजाय दिइन्छ वा सार्वजनिक स्थलमा ढुंगाले हानेर मार्नका लागि रिसले उग्र भएका जनताका बीचमा छाडिदिइन्छ ।
नेदरल्यान्डमा बलत्कारका दोषीलाई उमेरका आधारमा ४ देखि १० वर्षको काराबासको सजाय दिइन्छ । नेदरल्यान्ड यस्तो देश हो, जहाँ बिनासहमति फ्रेन्स किस (ओठ जोडेर गरिने चुम्बन) पनि बलत्कारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ र आरोपितहरूलाई बलत्कारबराबर नै सजाय दिइन्छ ।
फ्रान्समा बलत्कारीलाई १५ वर्षसम्म जेल सजायका साथसाथै यातना दिने कानुनी व्यवस्था छ, यस्तो सजाय ३० वर्षसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था छ ।
५. उत्तर कोरिया
बलत्कारजस्ता अपराधका लागि उत्तर कोरियामा कुनै दया र जेलसजायको प्रावधान छँदैछैन, बलत्कारीलाई पक्राउ गर्ने वित्तिकै गोली ठोकेर मारिदिइन्छ ।
रूसमा बलत्कारीलाई काराघरमा तीन वर्षसम्म थुनिन्छ, उसले पीडितलाई पुर्‍याएको क्षतिका आधारमा कैद सजाय ३० वर्षसम्म पुर्‍याइन्छ ।
अफनिस्तारमा बलत्कारीलाई बलत्कार भएको चार दिनभित्र गोली ठोकेर मारिन्छ अर्थात मृत्युका सजाय दिइन्छ ।
नर्बेमा बतल्कारीलाई पीडितसँग गरिएको निर्दयी व्यवहारका आधारमा ४ देखि १५ वर्षसम्मका सजाय हुने कानुन छ ।
अमेरिकामा बलत्कारसम्बन्धी दुई किसिमका कानुनहरू छन्, पहिलो संघीय कानुन र अर्को राज्य कानुन । संघीय कानुनअनुसार बलत्कारीलाई ३० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ भने राज्य कानुनअनुसार फरक-फरक किसिमका सजायका व्यवस्थाहरू छन् ।
भारतमा बलत्कारविरुद्धको कानुन २०१३ पछि त्यहाँ बलत्कारीलाई १४ वर्षसम्म जेल सजाय हुन्छ भने केही प्रकरणहरूमा फाँसी र जन्मकैदका समेत फैसला हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
११. साउदी अरब
साउदी अरबमा कुनै व्यक्तिलाई बलत्कार आरोपमा दोषी पाइएमा जाँचबुझपूर्व नै सार्वजनिक रूपमा मारिन्छ । यो विश्वकै क्रुरतम सजाय हो ।
इजिप्टमा पनि बलत्कारीलाई सार्वजनिक रूपमा नै झुन्ड्याएर वा काटेर मारिन्छ । जसबाट बलत्कारका ’boutमा समाजमा सन्देश पुर्‍याउन सकियोस् ।
इजरायलमा बलत्कारीलाई कम्तिमा चार र बढीमा १६ वर्षसम्मका कैद सजायको प्रावधान छ ।
यूएईमा पनि बलत्कारीलाई सीधै मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ ।
ग्रीसमा कानुनी किताबहरूमा बलत्कारका परिभाषा स्पष्ट रूपमा लेखिएका छन् । कुनै पनि प्रकारका शारीरिक शोषण, यौन उत्पीडन, ज्यान मार्ने धम्की दिएर गरिने जबर्जस्ती याैन सम्पर्कलाई बलत्कार मानिएको छ । यस्तो अपराधमा आजीवन कैद गरिन्छ भने अपराधीलाई जनावरसरह सिक्रीले बाँधेर राखिन्छ ।
जुलाई 4, 2016 | समाज, हट टपिक्स
शरिर कलाका रुपमा टाटुलाई लिइन्छ। यो निक्कै पुरानो आदीवासी परम्परा हो, एशिया देखी अफ्रिका महादेशमा रहेका प्राचिन जाति तथा सम्प्रदायमा शरिरमा विभिन्न रंगहरु पोतेर कला प्रदर्शन गर्ने परम्परा रहेको छ। नेपालका धेरै सम्प्रदायमा शरिरमा विभिन्न खालको कला खोप्ने चलन छ। नेपाली पहाडी बस्ती साथै काठमाडौं उपत्यकामा पनि शरिरमा खोपिने चित्रलाई गहनाको रुपमा लिइन्छ। नेपाली विश्वास अनुसार शरिरमा खोपिएका टाटु मात्र त्यस्ता गहना हुन जुन मानिसले मर्दा आफूसँगै लिएर जान्छ।
नेपाली मध्यम वर्गिय समाजमा भने टाटु खोपाउनुलाई राम्रो मानिँदैन। टाटु खोप्ने अनि पियरसिंग गर्ने (शरिरका विभिन्न भागमा छेडेर धातुका गहना लगाउने) केटा वा केटीलाई आवाराका रुपमा हेर्ने मानसिकता आज पनि छ। हुन त नाक र कान छेड्ने पुरानो परम्परा हो तर पनि युवाहरुले नाक र कान छेड्ने परम्परालाई नाइटो र अन्य गोप्य अंगसम्म पुरयाएको पाइन्छ जसलाई समाज राम्रो मान्दैन।
एशिया अफ्रिका देखी अमेरिका अनि यूरोप सबै महादेशमा सरोवरी भएको यो शरिरमा रंग प्रयोग गरेर कलात्मक स्वरुप दिने चलन यतिखेर प्रविधिको विकासका कारण निक्कै पृथक भएको छ। यो कला मात्र नभएर व्यवसाय अनि प्रविधि बनिसकेको छ। प्रविधिको प्रयोगले मानिसको छालामा वास्तविकताको भान दिने खालका चित्रहरु कोर्न सकिने भएको छ। थ्रिडी आर्टको रुपमा शरिरमा कोरिने चित्रहरुलाई अत्यन्त वास्तविक देखिने गरेर दृश्यात्मक एवं वास्तविक स्वरुप दिन सकिने भएको छ। जसले गर्दा टाटु अब केबल टाटुको रुपमा मात्र छैन। टाटु खोप्ने कलाकारको दक्षता, ज्ञान र अनुभवको आधारमा यस्ता थ्रीडी टाटुहरुले मानिसलाई उनीहरुको मुख खुलाका खुला हुने गरि दंग पार्ने गराउँछन्। यहाँ त्यस्ता केही अनौठा टाटुका तस्वीरहरु छन् जुन तपाइँले टाटु खोपाउने समयमा उदाहरणका रुपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ।
जुलाई 3, 2016 | राजनीति, समाज
जुलाई 3, 2016 | समाज, हट टपिक्स
अप्रिल 29, 2016 | फेमस, फोटो, समाज, सम्बन्ध, हट टपिक्स, हाँसोउठ्दो